भार्गवको ८० प्रतिशत हकप्रद शुक्रवारदेखि विक्रीमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी भार्गवको ८० प्रतिशत हकप्रद शुक्रवारदेखि विक्रीमा
भार्गवको ८० प्रतिशत हकप्रद शुक्रवारदेखि विक्रीमा
कात्तिक २३, काठमाडौं (अस) । भार्गव विकास बैङ्कले कात्तिक २४ गते शुक्रवारदेखि ८० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्रीमा ल्याउने भएको छ । बैङ्कले १० बराबर ८ को अनुपातमा प्रतिशेयर रू. सय अङ्कित मूल्यको २१ लाख १२ हजार कित्ता शेयर विक्रीमा ल्याउने भएको हो ।
यस हकप्रदमा मङ्सिर २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । हकप्रद प्रयोजनका लागि बैङ्कले असोज १५ गते बुक क्लोज गरेकाले असोज १४ गतेसम्म कायम रहेका शेयरधनीले मात्र यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् । विक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल मार्केट्स र बैङ्कको केन्द्रीय तथा शाखा
कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, एनएमबि बैङ्कको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिने विक्री प्रबन्धकले जानकारी दिएको छ । हाल रू. २६ करोड ४० लाख चुक्तापूँजी रहेको यस बैङ्कको चुक्तापूँजी हकप्रद निष्कासन पश्चात रू. ४७ करोड ५२ लाख पुग्नेछ ।